Vaovao - Ahoana no hiatrehana ny tsy fahombiazan'ny valva?
Ahoana ny fomba hiatrehana ny tsy fahombiazan'ny valva?
Rehefa mitaingina lava ny moto dia hiseho matetika ny fahazoan-dàlana amin'ny motera, tranga lehibe na kely loatra, hahitana ny antony, mila manatona fampahalalana marobe ianao, mpamatsy valizy môtô hanome anao fanadihadiana tsotra.
Fanan-kery eo amin'ny motera
Lehibe na kely valizy amin'ny motera ho an'ny moto ny fahazoan-dàlana dia hisy fiantraikany amin'ny fiasan'ny maotera mahazatra. Ny fanokafana tara sy ny fanidiana ny vavahady fidirana aloha: noho ny tsy fahampian'ny fanokafana valizy dia hihena ny habetsaky ny fidirana notaterin'ny fangaro azo dorana, ka miteraka tsy fahombiazan'ny herin'ny motera.
Valizy mamoaka setroka lehibe (izany hoe, nohafohezina ny fotoana fanokafana ny vavahady): amin'ny fizotran'ny famoahana, dia miteraka fatiantoka mahantra, tsy fahampian'ny vidim-piainana, fitomboan'ny fasika misy solika, mari-pana amin'ny milina be loatra, fihenan'ny herinaratra, ary ny dona amin'ny valizy, misy fiatraikany amin'ny androm-piainana ny ampahany.
Fanokafana aloha sy fanidiana tara ny valizy fidiran'ny motera moto(lava kokoa ny faharetan'ny fanokafana valva): miteraka fanidiana ny valizy malalaka sy ny fivoahan'ny rivotra, izay mampihena ny famatrarana sy ny herin'ny motera. Amin'ny tranga henjana, ny valizy dia hametraka fametrahana karbaona na ablative betsaka, mba tsy hiasa ara-dalàna ny varingarina.
Valizy mamoaka setroka kely: mitarika amin'ny fanidiana ny valizy malalaka sy ny fivoahan'ny rivotra ao Nanchang, ka tsy feno ny fandoroana ary mihena ny herinaratra. Indraindray dia hisy fisehoan-javatra manapoaka fantsom-panafahana.
Ahoana ny fomba hiatrehana ny fahasimban'ny moto valizy motera
1. Vaky na aidina ny tampon'ny valva, izay tokony hosoloina.
2. Rehefa vita ny tarehy faran'ny tsorakazo dia azo apetraka amin'ny grinder cylindrical ivelany ary ampiasaina aorian'ny famerenana amin'ny laoniny ny malamalama.
3. Mihoatra ny 0.03mm ny diplaoman'ny tsorakazo. Rehefa mihoatra ny 0.02mm ny fanodikodinam-bokatra eo an-tampon'ny valizy, dia azo ahitsy amin'ny ankapobeny ny fipetrahany amin'ny alàlan'ny fametahana azy amin'ny tanana ary avy eo nojerena miaraka amin'ny tondro dial amin'ny vy miendrika V mandra-pahaizany mahafeno fepetra.
4. Raha misy karibonetra mainty sy oksida mitarika volomparasy eo amin'ny tampon'ilay valan-tsofina, dia azo alemana ao anaty solitany izy, ary avy eo esorina amin'ny tsimoka hazo na borosy varahina aorian'ny nanalefaka azy.
5. Raha tsy dia mitafy mafy ny tsora-by ary ny fihenan'ny fihodinana sy ny varingarina dia tsy nihoatra ny 0.03mm, ny tsorakazo vita amin'ny valizy dia azo nohosorana tamin'ny haben'ny fanamboarana tamin'ny milina fitotoana tsy misy afovoany, ary avy eo namboarina tamin'ny fomba fametahana chrome.
6. Ny famelezana kely, ny lavaka, sns. Eo amin'ny vatan'ny valiha dia matetika no esorina amin'ny fikolokoloana tanana. Alohan'ny fikolokoloana, ny valizy, ny seza valizy ary ny torolàlana dia asio solika madio, ary avy eo eo amin'ny valiha misy valizy mifono miraikitra amin'ny fikosoham-bary, miaraka amin'ny fihoaram-bovoka mba handraisana ny tampon'ny valizy hitodihana hatrany ary hanova ny toerana, ny pitting, lavaka, mitoto
Rehefa misy peratra fotsy eo amin'ny valin'ny valizy, dia manadio ny valizy amin'ny fametahana fikosoham-bary tsara. Farany, sasao amin'ny lasantsy ilay paty, apetaho ny menaka ary kosohy mandritra ny minitra vitsy.
7. Ny fametahana lalina, ny lavaka ary ny teboka eo amin'ny valindrihana valiha dia tokony hosorana amin'ny milina poloney. Raha tsy misy ireo fitaovana etsy ambony ireo dia azo atao clamp ihany koa ny valizy ary ny kalitao azo ampifanarahana amin'ny collet eo amin'ny dabilin'ny dabilio, ny lathe kely, na ny fandefasana herinaratra tanana. Avy eo azo atomboka ny valizy. Ireo kileman-javatra dia azo apetraka miaraka amin'ny velaran-kodiarana miaraka amina fisie fisaka manify, ary ny velaran-kodiarana dia azo nohosorana amina sosona lamba emerazy 00 tsara ao anaty fisie. Ny hafainganam-pandehan'ny fitotoana dia tsy tokony ho avo loatra, ny hetsika tokony ho malama. Raha hita fa ambany noho ny 0.5mm ny hatevin'ny tampon'ilay valizy, dia tokony hosoloina izany.
Ahoana ny fomba hiatrehana ny fahasimban'ny faritra môtô môtô?
(1) Asio menaka mena manify na menaka blueprinting eo amin'ny valindrihana valiha, ary avy eo tsindrio moramora ny valizy amin'ny seza valizy ary ahodina ho an'ny 1/4 fihodinana alohan'ny hisintonana azy. Raha misy peratra misy menaka mena mitohy na marika solitany blueprinting eo amin'ny seza valizy dia midika fa tsara ny famehezana.
(2) Miaraka amin'ny pensilihazo malefaka (4B na 5B) manorisa tsipika maromaro eo amin'ny tampon'ny valiha, ary avy eo mifandraisa amin'ny seza valizy mihodina 1/4 fihodinana aorian'ny fisintahana azy, toy ny tapaka ny tsipika pensilihazo amin'ny valantsara. eny, manondro tombo-kase tsara ihany koa.
Raha te-hahazo vaovao bebe kokoa ianao valizy maotera tsara kalitao, azafady aza misalasala manontany anay.